Ndege Mawiricheya - Chigaro cheWheelchair | Karman Healthcare
×	 KM-AA20	1 × $2,438.00
musha / Chinyorwa Wiricheya / Ndege Wiricheya
View ngoro “KM-AA20” has been added to your cart.
At Karman, tine anopfuura zana mamodheru, mhando, misiyano yemawheelchair aunosarudza kubva. Tine mamwe masarudzo e Manual Wiricheya, kusanganisira Kutakura Mawiricheya, Mawiricheya akajairwa, Mawiricheya asingaremi, Ultra Lightweight Wiricheya, Ergonomic Wiricheya uye zvakawanda. Kusarudza chikamu, modhi, kara kana kunyange mutengo poindi kwakakosha kune wekupedzisira mushandisi kunyatsonzwisisa "mamiriro eunyanzvi" zvigadzirwa zvekufamba.
Usakanganwa kutarisa yedu patent S-ERGO S-Rakaumbwa Seating System. Takazvipira kukutsvagira chigaro chakanakira chako cheupenyu hwako mukunyaradza, kufamba uye kukwikwidza sarudzo. Isu tiri Karman vari pano uye vakazvipira kune zvako zvese zvaunoda. Isu tinotopa Kumira Wiricheya kutenderedza yedu chigadzirwa musanganiswa kusvika padanho repamusoro rezvipo mu Kufamba Wiricheya chikamu. Tinokutendai nekutishanyira.
Ese Ultra asina kurema mawiricheya anouya neanobata anobata akajairwa. Mazhinji anowanikwa se16 ″ kana 18 ″ chigaro upamhi. Mazhinji macheya ane dhesiki-refu armrest mapedhi. Mimwe mienzaniso yemawiricheya ine mafirifi ekumashure anoita kuti kutakura kuve nyore zvikuru mudhiragi remotokari kana chero imwe nzvimbo yekuchengetera. Swing-away detachable legrest zvakare inopa dzimwe nzira dzekufamba uye nyore kushandisa. Bariatric mawiricheya kana rinorema basa mamodheru.
Bvunza nezve edu anoshanduka kana mushonga unobva kuBariatric kana iyo KM-8520F20 uye KM-8520F22 isingakwanise chero chaicho chaunoda iwe kana kutarisa chedu BT-10 modhi uye S-2512 modhi. Zvigaro zvekufambisa zvakare zvinofanirwa kuve zvinoshanduka zvekubatsira zvekufambisa zvekufamba uye chiitiko kunze kwemusha, iwe uchavawanawo vari pasi peasina kurema mashoma mawiricheya. Ultra lightweight whelchairs anosanganisirawo akawanda mawiricheya echimwe chinangwa iwo ese akareruka,
Kutenga Chitoro chedu cheWiricheya - Chirema cheWiricheya